မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): သုဿန်စောင့်မဖဲဝါအကြောင်း (ဖတ်ပြီးရင် ဘယ်လိုမြင်လည်း..တကယ်လား?)
သုဿန်စောင့်မဖဲဝါအကြောင်း (ဖတ်ပြီးရင် ဘယ်လိုမြင်လည်း..တကယ်လား?)
ဖတ်ပြီးတော့ တွေးစရာတွေ အများကြီးပဲ.။ ဖတ်မကြည့်ရသေးဘူးဆို ရင် ဖတ်ဖြစ်
အောင်ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် ။ ဒီစာအုပ်ကြောင့် နာမည်ကျော်တာတဲ့
အခုမှပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ စာရေးဆရာ သွန်းနေစိုးရေးတာပါ ။ အခုတလောမှာ
ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဆရာ ဆို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်. တကယ့်ကို ထူးဆန်းတယ်ဗျ
ဖတ်ကြည့်ပြီးရင် သိလိမ့်မယ်..ကဲ ဖလမ်းဖလမ်းနော်... ဘာလို့ ဖတ်စေချင်ရတာလဲ
ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ပြီးရင် သိစေရမယ်.........ကဲ အောက်ပါတို့ ကို နှိပ်ပြီးဖတ်စေ.....။
ဒီလင့်မှာယူလိုက်ပါ - http://www.mediafire.com/သုဿန်စောင့်မဖဲဝါ.
ဒီလင့်မှာ နှိပ်၍ဖတ်ပါ - သုဿန်စောင့်မဖဲဝါအကြောင်း
အပြည့်အစုံကို ဆရာရဲ့ဆိုဒ်မှာဖတ်ကြည့်ပါနော်..စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်.........။
ကျနော့် အအောင်မြင်ဆုံးစာအုပ်ဟာ `သုသာန်စောင့်မဖဲဝါ´ ဆိုတာ အတော်များများသိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ မဖဲဝါအကြောင်း ကျနော် ရေးဖြစ်ခဲ့သလဲ? ရေးစရာဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးထဲကမှ ကျနော်ဒါကို ဘယ်လို ရွေးဖြစ်ခဲ့သလဲ? ပြီးတော့ ဒီအကြောင်းတွေကိုရော ကျနော် ဘယ်လို သိလာခဲ့သလဲ?
အဲဒါတွေကိုတော့ ကျနော် ဘယ်သူ့မှ မပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါ။ စာအုပ်ထဲ ထည့်ရေးဖို့ ကြံပြန်တော့ ဆင်ဆာက No တဲ့။ မဖဲဝါနာမည်တောင် သုံးခွင့်မရလို့ အခုဒီရက်ပိုင်းမှာတင် ထွက်တဲ့စာအုပ်ကို `သုသာန်မှာ သိမ်းတဲ့ဇာတ်´ လို့ နာမည်ပေးထားရပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီစာအုပ်ဟာ `သုသာန်စောင့်မဖဲဝါဇာတ်သိမ်း´ ပါပဲ။ ထားပါတော့။ ဒါတွေပြောရင် ဒေါတွေပါတယ်။ အခု မဖဲဝါအကြောင်းပဲ ဆက်ရအောင်။
မဖဲဝါကို ဘယ်လိုရေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရေဆုံးရေဖျားကို စပြောခင် မဖဲဝါစာအုပ်ထွက်တဲ့ ကာလလေးကို အရင်ဖောက်ပြောချင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းမို့ပါ။ ထူးဆန်းတာက ...
မဖဲဝါစာအုပ်ထွက်တိုင်းမှာ ကျနော့်အိမ်နားမှာ အသုဘ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး မဖဲဝါစာအုပ်ထွက်တော့ အိမ်အောက်ထပ်ကလူ ဆုံးတယ်။ ခု မဖဲဝါဇာတ်သိမ်းထွက်ပြန်တော့ အခုနေတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ အပေါ်ထပ်ကမိန်းမ ဆုံးလို့တဲ့။ `ဟာ ရုတ်တရက်ကြီးပါလား´ လို့ ကျနော် အံ့သြသွားတယ်။ အဲဒီမိန်းမကို ကျနော် တွေ့တွေ့နေတာဗျာ။ ကျန်းကျန်းမာမာ သန်သန်စွမ်းစွမ်းကြီး။ ဟိုတစ်နေ့ကတောင် ကျနော်နဲ့ လှေကားအတက်မှာဆုံတော့ လက်ထဲမှာလည်း ကျနော်က စာအုပ်တွေ ပွေ့ပိုက်ထားတာနဲ့ သူနဲ့ စကားစပ်မိသေးတယ်။
`စာရေးဆရာ လို့ပြောတယ်၊ ဘာစာတွေ ရေးတာတုန်း´ ဆိုတာနဲ့ ကျနော်လည်း ပါလာတဲ့ ကျနော့်စာအုပ်လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီထဲမှာ မဖဲဝါ- ပထမပိုင်း စာအုပ်လည်း ပါသွားတယ်။ အခုလို ရုတ်တရက်ကြီး သူ ဆုံးတာ အဲဒါနဲ့များ ဆိုင်နေမလား? မဆီမဆိုင်တွေးမိပြီး ကျနော်တော့ သူ့အသုဘပို့တောင် မသွားရဲတော့ဘူး။ တိုက်ဆိုင်တာပါလို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဖြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဖဲဝါနဲ့ ပတ်သက်ရင် အဲဒီလို တိုက်ဆိုင်မှုတွေက များကို များလွန်းလှတယ်။
ခင်ဗျားတို့ မဖဲဝါစာအုပ် ဖတ်ဘူးသလား?
ဖတ်ဘူးတယ်ဆို ကျနော် တစ်ခုလေးမေးချင်တယ်။ ကြောက်သလား?
ကြောက်တယ်ဆို ထပ်မေးမယ်။ ဘာကို ကြောက်သလဲ?
ဘာလို့ အဲဒီမေးခွန်းတွေ ကျနော်မေးနေရသလဲဆိုတော့ ကျနော်လဲ မဖဲဝါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြောက်လို့ပါပဲ။ တကယ်တော့ ကျနော်ဟာ ခင်ဗျားတို့လိုပဲ မဖဲဝါနဲ့ပတ်သက်ရင် ခံစားကြောက်ရွံ့တတ်သူပါ။ ပြောရင် ယုံပါ့မလား.........
Author Anonymous at 11:05:00 PM
Labels: ဒဿကျော်စွာ, ဖတ်စေချင်တဲ့စာအုပ်တွေ, သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား
ဖတ်လည်းဖတ်ကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် မြတ်က သတ္တိက ကောင်းကောင်း။ ကြိုးစားပြီး ဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ် နော်။
ဖတ်ဖြစ်အောင်သာ ဖတ်ကြည်ပါ မမမြတ်ရေ...တကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပါ..ဖတ်ပီးရင် တစ်ခုခုတော့ တွေးစရာပါလာရင် ဆွေးနွေးကြရအောင်ဗျာ...ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးပြောပြစရာ သူငယ်ချင်း ရှိပါက..zwmnna@gmail.com ပါ
ပြီးရင်တော့မောင်နဲ့သမီးတော် ဂျီတော့မှာ အခြေ အတင်
အိုခေလေ..ညွှန်းတဲ့ သူကတောင် ညွှန်းနေပြီပဲဟာကို ...လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့ နော့။ ဒါမျိုးဆို မိုးရိပ်ကို တို့ သိပ် ၀ါသနာပါတာ...။မိုးရိပ်အကောင့်လေးမှတ်ထား..moeyateko@gmail.com ပါ ။ စိတ်ဝင်စားမယ်ဆို လာလည်လို့ ရတယ်..moeyateko.blogspot.com သိပ်များများစားစားတော့ မရှိသေးဘူး...။
ကျနော်ညည တစ်ယောက်ထဲ မထရဲတော့ဘူး....တကယ်ကောင်းသလို ဗဟုသုတတစ်ခုခုရော ရလိုက်တယ်မလား....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်နေစဉ်မှာရော ဖတ်ပြီးတဲ့အထိ ရင်ထဲကို တစ်ခုခု ခံစားစေနိုင်တာ..မဖဲဝါကြောင့်လားး..
အဲ့ဒါ ဖတ်ပြီးသား မေ့သွားဘီ ထပ်ဖတ်ရင်ကောင်းမလား ပျင်းဒယ် တိန် (ဖိုးမောင် စတိုင် :P)
ကျနော်လည်း ဖတ်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ ဒေါင်းသွားတယ်နော် ကျေးဇူးပဲဗျာ
snow king said...
ဟာ အပြီး ထိ မပါဘူးလားဗျ
Myo Lay said...
ဘာမှလဲ မပါဘူး ဒေါင်းထားတဲ့ထဲမှာ အစလေးပဲ ပဲပါတယ် ပြန်တင်ပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်....
Happy World said...